के तपाईँलाई थाहा छ ? जिन्स प्यान्टको दाहिने पट्टि हुने सानो खल्ती के का लागि हो? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
के तपाईँलाई थाहा छ ? जिन्स प्यान्टको दाहिने पट्टि हुने सानो खल्ती के का लागि हो?
त्यो जिन्स प्यान्टको दाहिनेपट्टीको खल्तीमाथि हुने सानो खल्तीलाई त सबैले याद गर्नुभएकै होला। त्यसैको ठ्याक्कै तलपट्टी त्यत्रो ठूलो खल्ती हुँदाहुँदै किन सानो खल्ती राखिएको होला? गोप्य खल्ती हो भनौँ भने ठ्याक्कै देखिने ठाउँमा नै छ।
त्यसो भए, त्यो सानो खल्तीको काम के हो त?
जिन्स प्यान्टको फेसन आउन थालेदेखि मानिसहरूले त्यो खल्तीलाई धेरै कामको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर सायद धेरैलाई यो के को लागि हो भनेर थाहा नहुन सक्छ।
गितार बजाउनेहरू अधिकांशले यो खल्तीमा ‘गितारको पिक’ राख्ने गरेको पाइन्छ। ठूलो झोलामा सानो पेन ड्राइभ राख्दा चाहिएको बेलामा भेट्टाउनै गाह्रो हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहै होला। यहि कारणले गर्दा पनि अधिकांशले त्यो सानो पेन ड्राइभलाई सानै खल्तीमा राख्ने गर्दछन्।
कसैले यसलाई ‘कण्डम राख्ने खल्ती’ पनि भन्छन्। धेरैले यो सानो खल्तीमा पैसाको सिक्का राख्ने गर्छन्।
आ-आफ्नै प्रयोजनको लागि यो खल्तीको प्रयोग हुने भएपनि यसको सुरुवात के को लागि भएको थियो?
वास्तवमा, यो खल्तीमा घडी राख्नको लागि बनाइएको थियो। सन् १८०० ताका, विदेशी ‘काउब्वाइ’हरूले आफ्नो घडीलाई चेनमा बाँधेर आसकोटभित्र राख्ने गर्दथे। यसरी आसकोटभित्र राख्दा सजिलैसित घडी हराउने अथवा बिग्रने गर्दथ्यो।
यहि कारणले गर्दा नै ‘लिभाइ स्ट्रस’ (Levi Strauss) ले प्यान्टको खल्तीनजिकै सानो खल्ती बनाएका थिए, जहाँ घडीलाई सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो।
गणितका यि शिक्षक मेस्सीलाई भेट्न इरानदेखि रुससम्म साइकलमा गए, मेस्सीको अटोग्राफ लिएर फर्किन चाहान्छन्
एजेन्सी । दक्षिण भारतका क्लिफिन फ्रान्सिस मेस्सीका डाईहार्ट फ्यान हुन् । गणितका शिक्षक उनी दैनिक
संसारकै सबैभन्दा कम उमेरकी यी पोर्नस्टार, बन्दैछिन् सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा कम उमेरकी भनिएको पोर्नस्टार आड्रीयाना मोरिसको केही तस्विरसहित पछिल्लो समय सामाजिक
एजेन्सी । रसियाली सुन्दरीहरु मात्रै होइन रसियाका वेश्याहरु पनि हत्तपत्त यौन सम्पर्कका लागी राजी नभएको
साविक विजेता जर्मनीलाई हराएको खुसियालीमा उफ्रिँदा मेक्सिकोमा भुकम्पको धक्का
मेक्सिको सिटी । साविक विजेता जर्मनीलाई हराउदा मेक्सिकोमा भुकम्प नै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार